Fampakarambadin’ny zanaky ny mpanjaka
"Efa voavoatra ny fampakarambady… Koa mankanesa ianareo any amin’ny sampanan-dàlana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin’ny fampakarambady.”."Matio 22:8, 9
"Mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako, izay avy amin’ny lalàna, fa izay avy amin’ny finoana an’i Kristy."Filipiana 3:9
Fanoharana vitsivitsy; Matio 22:1-14
Famintinana: Nanao fanasana lehibe ity mpanjaka iray, noho ny fampakarambadin’ny zanany lahy. Nirahiny ny mpanompony haka ireo nasaina, nefa nandà ireto farany. Mbola namerina ny fanasany ihany izy, saingy mbola nahita fialan-tsiny hatrany ireo nasaina. Koa nirahin’ny mpanjaka ireo mpanompo hiantso izay rehetra te ho avy, “na ny ratsy, na ny tsara”. Dia feno ny efitrano! Niditra ny mpanjaka, ary nahita lehilahy iray tsy nitafy ny akanjo fitondra amin’ny fampakarambady (izay omen’ny tompon’ny fanasana): nasainy navoaka tany ivelany ilehio!
Heviny: Andriamanitra no tompon’ny fanasana; ny fanasana ho amin’ny fampakarambady dia ny fanambarana ny Filazantsara. Ny mpanompo dia ireo izay mitory izany. Ny olona nasaina voalohany dia ireo Jiosy niara-belona tamin’i Jesosy, saingy maro ny nandà sy nanenjika ny kristiana. Koa nasaina nandeha eran’izao tontolo izao ireo mpanompo, ka maro ny nandray ny Filazantsara. Nisy mody nandray, nefa tsy nanaiky ny fahamarinana atolotr’Andriamanitra maimaimpoana, asehon’ilay akanjo fitondra amin’ny fampakarambady.
Fampiharana: Natao ho an’ny rehetra ny Filazantsara, ho an’ireo izay very ao anaty faharatsiana, ary koa ho an’ireo izay toa tsara ivelany. Nahoana moa? Satria raha te ho voavonjy, dia tsy miantehitra amin’ny fahamendrehan’ny tena, fa tsy maintsy mitafy ny fahamarinana avy amin’ny finoana an’i Jesosy Kristy. Raha misy olona manatona ho naman’ny kristiana, kanefa tsy manana an’i Jesosy ho Mpamonjiny, toa inona ny henatra miandry azy, ary hanao ahoana ny hiafarany!
Eo ampelatananao ny taratasy fanasan’ny mpanjaka. Azonao atao tsinontsinona na lavina izany… Tsy ampy ny hoe nasaina, fa ilaina ny manaiky sy manatona araka izay tadiavin’Andriamanitra, izany hoe mitafy ny fahamarinan’i Kristy, amin’ny alalan’ny finoana Azy.